Odisha Tours မှနှင့် Travels | ဇိမ်ခံမော်တော်ကားများနှင့်နည်းပြငှားရမ်းခြင်း Tariff
ငါတို့သည်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်အခါသမယထဲကအကောင်းဆုံးရရန်သင့်အား enable လုပ်ဖို့ဇိမ်ခံကားများနှင့်နည်းပြများငှားရမ်းခြင်းကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဦးစားပေးသင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Bhubaneswar နှငျ့သငျ Odisha သွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်ယင်း၏ဝန်းရံ၏အထင်ကရမြင်ကွင်းများအချို့ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။
အပို / HR
အပို / KM
1 Dzire သို့မဟုတ်အလားတူ 850 1500 140 14
2 Scorpio သို့မဟုတ်အလားတူ 1000 1800 160 16
3 BRV သို့မဟုတ်အလားတူ 1200 2200 200 20
5 ဟွန်ဒါစီးတီး 1600 2600 260 25
7 ကံကောင်းထောက်မစွာ 3500 6500 600 55
8 Audi-A3 သို့မဟုတ် BMW ကား-X1 5000 10000 900 90
9 Mercedes-E ကို 6000 11000 1000 100
ကားမောင်းသူနေ့ Bata: 200 ဖို့ SL #1 များအတွက်6နှင့် 300 မှ7များအတွက် 9
ညဥ့်ကိုခွင့်ပြု (22: 00 မှ 06: 00 နာရီ): ရူပီး။ 200 ဖို့ SL # 1 များအတွက်6နှင့်ရူပီး။ 300 မှ7များအတွက် 9
အနီးသို့ရပ်ရန် Outstation: ရူပီး။ 300 နှင့်ရူပီးမှ SL # 1 များအတွက်6။ 400 မှ7များအတွက် 9
ကီလိုမီတာ & နာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှားရမ်းတည်နေရာ (ဂိုဒေါင်ရန်ဂိုဒေါင်) မှာ start & အပြီးသတ်ပါလိမ့်မယ်
4 နာရီ / 40 ကီလိုမီတာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပြီးနောက် 30 မိနစ်တစ်ဦးလိုက်လျောခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဆိုသည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ ကျော်လွန်. မဆို extension ကိုအဘို့, 8 နာရီ / 80 ကီလိုမီတာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါလျှောက်ထားရမည်။ 8 နာရီ / 80 ကီလိုမီတာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပြီးစီးတွင်, အပို KM / နာရီပို့ဆောင်ရေး Tariff နှုန်းအဖြစ်တရားစွဲဆိုခံရကြလိမ့်မည်။
သေဆုံးသူအခွန်, Interstate အခွန် & ကားရပ်ရန်အမှန်တကယ် + GST ​​နှုန်းအဖြစ်အပိုကောက်ခံပါမည်: 5% ။
outstation တာဝန်အဘို့, နိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်ကိုမဆို, ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲကိုဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်အကွာအဝေးနှုန်း 250KMs တွက်ချက်ခံရကြလိမ့်မည်။ စွဲချက်အခွန်နှုန်းအဖြစ် KM နှုန်းအပေါ် အခြေခံ. ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
A / C ရပ်နေသည်ကို Pro ကို-rata အခြေခံပေါ်မှာနှောဖြစ်ပါတယ်။
လောင်စာဆီစျေးနှုန်း & အခွန်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဓိကတိုးရှိလျှင်အထက်ပါအခွန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောလိမ့်မည်။
ဇိမ်ခံ A / C နည်းပြ
20 ထိုင်ခုံနေရာ, 27 ထိုင်ခုံနေရာ
41 ထိုင်ခုံနေရာ, 45 ထိုင်ခုံနေရာ
စာအုပ်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုအပေါ်ကို SMS သတိပေးချက်များ automated ။
Pick-Up ၏ 02 နာရီမတိုင်မီယာဉ် & ကားမောင်းသမား၏ဝေစုအပေါ်ကို SMS / မေးလ်သတိပေးချက် automated ။
နေ့စဉ်သတင်းများစက္ကူ, complimentary အခြေခံပေါ်မှာရှိသမျှကားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသတ္တုရေ Bottle သ, Umbrella, ပထမဦးစွာ-Aid ကို Kit, ရေခဲပြင်-Box ကိုများနှင့်အပူပိုင်းတစ်ရှူးစက္ကူ။
အားလုံးမော်တော်ယာဉ်များ, သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်သန့်ရှင်းသောလေအေးပေးစက်, Non-ဆေးလိပ်သောက်ဖြစ်ကြသည်။
လနျးဆနျးအဘို့, ရေစာ, သစ်သီးများ & ဖျော်ရည်နောက်ထပ်စွဲချက်တွေနဲ့တောင်းဆိုချက်အပေါ်ကိုယ်စားလှယ်အဘို့အစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။
ကားမောင်းသမားနှင့် / သို့မဟုတ်သဲ Pebble ရဲ့လေဆိပ်ကိုယ်စားလှယ်ဧည့်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ Pick-up ကိုလက်ခံရရှိရန်လေဆိပ် / မီးရထားဘူတာမှာကွိုဆိုစာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည် positioned ။
သဲကျောက်စရစ် Tours မှအတွေ့အကြုံရှိကားမောင်းသမား, လကျအောကျခံ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေးအပ်နှင့်လမ်းများနှင့်ကုမ္ပဏီယူနီဖောင်းခင်မင်သိကျွမ်း။
ထိရောက်သောပူးတွဲထုံးစံဖြစ်ရပ်များနှင့်ညီလာခံအပေါ် Clients တွေအနေနဲ့၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်နေရာမှာအသေးစိတ်နေကြသည်။
အဆိုပါနာရီတက္ကစီ-service ကို round ကော်ပိုရိတ်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် Travels, အပန်းဖြေခရီးထွက်ခဲ့, ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်နှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဧည့်သည်ရဲ့ preference ကိုအသေးစိတျနောက်ဆက်တွဲအမိန့်အပေါ်နေဆဲပိုကောင်းန်ဆောင်မှုများပေးဘို့မှာ Data-အခြေစိုက်စခန်းထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။
ကားတစ်စီးဘွတ်ကင် 24-နာရီမတိုင်မီလုပ်ခံရဖို့ရှိသည်။ ယာဉ် 24 နာရီအတွင်းလိုအပ်ပါသည်လျှင်သို့သော်သဲကျောက်စရစ်စစ်ဆင်ရေး Desk ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
On-line ကိုကြိုတင်မှာယူမှုအောင်နေစဉ်, သတ်မှတ်ထားသောပုံစံအတွက်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည်းဆည်းခံရဖို့ရှိပါတယ်။
on-line ကိုကြိုတင်မှာလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုလက်ငင်းငွေပေးချေလိုက်နာပါ။ သို့သော်သက်ဆိုင်သောအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ။ အခွန်, ခွန်ကောက်ကြေး, ကားရပ်ရန်အခကြေးငွေနှင့် Inter-ပြည်နယ်နယ်စပ်ရေးရာခွင့်စွပ်စွဲချက်တက္ကစီနှင့်အတူ dispensing ၏အချိန်မှာအသုံးပြုသူပေးဆောင်ခံရဖို့ရှိသည်။
သဲကျောက်စရစ်ရဲ့ website ကတဆင့်လုပ်အားလုံးသံသယများနှင့်အရောင်းအသဲကျောက်စရစ်များကပြန်လည်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သဲကျောက်စရစ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန် exigencies သည်နှင့်အညီတစ်ဦးကိုအတည်ပြုဘွတ်ကင်နောင်တဖို့ prerogative ရှိပါတယ်။
အဆိုပါဘွတ်ကင်မတိုင်မီ 15 နာရီဖျက်သိမ်းလျှင်ခန့်မှန်းခြေငွေတောင်းခံပမာဏ၏ 06% ၏ transaction ကြေးတရားစွဲဆိုခံရကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါတက္ကစီကားဂိုဒေါင်ထဲကဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ခန့်မှန်းချက်များအပြည့်အဝပမာဏကိုဧည့်သည်အားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
တွင်-လိုင်းဘွတ်ကင်ပြီးနောက်, သင်ကကျွန်မတို့ရဲ့ 24Hrs ဝန်ဆောင်မှုစက်ရုံနှင့်သင်၏ status ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။